အာဇာနည်မျိုးသေရိုးမရှိ: *အာ* သံလေးများ ကြားချင် ပါတယ်..??
*အာ* သံလေးများ ကြားချင် ပါတယ်..??
အာရပ် မွတ်စလင် မိုဘိုင်း ဖုန်း ကုမ္ပဏီ
ဒါမျိုး လှုတာကို ရခိုင် လူမျိုး တွေ နဲ့ မျိုးချစ်တွေ လက်ခံတယ်လား..??
ဘောလုံးလောက အောင်နိုင် ရေး အတွက်
Ooredoo က စပွန်ဆာ ပေးတာ ကိုရော..
ဖွတ်ဘင်္ဂါလီရွှေမောင် နဲ့ အန်တီစု ဓါတ်ပုံတွဲရိုက်တာ မြင် ဖူးပါသလား..??
အစွန်းရောက်မျိုးချစ် ကျီးများ ရဲ့
အန်တီစု နဲ့ NLD ကို ဝိုင်း *အာ* သလိုမျိုး
အရိုးစည်းရိုးထိုးမယ့် အစွန်းရောက်မယ့် သူများ ရဲ့ *အာ* သံလေးများ
လေးစားစွာဖြင့် အောင်အောင်ရွှေ်